Buufataaleen fayyaa 8 tajaajila wallaansa baqaqsanii yaaluu eegalan – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Buufataaleen fayyaa 8 tajaajila wallaansa baqaqsanii yaaluu eegalan
On Feb 10, 2020 31
Finfinnee, Gurraandhala 2, 2012 (FBC) – Dhiibbaa hospitaala motummaarra jiru hir’isuuf buufataaleen fayyaa 8 tajaajila wallaansa baqaqsanii yaaluu eegaluu isaanii Biiroon Fayyaa Magaalaa Finfinnee beeksiseera.
Biiroo Fayyaa Magaalaa Finfinneetti daayreektarri tajaajila meedikaalaa aaddee Maahileet Girmaan akka himanitti, hoospitaala mootummaa 13 magaalaa Finfinnee keessa jirutti yaala foyya’aa argachuuf yaalamtoonni kutaalee biyyattii garagaraa irraa yaalamuuf dhufan tajaajiluun humnaa ol ta’eera jedhaniiru.
Dhiibbaa kana hir’isuuf ammoo bufataalee fayyaa magaalichaa keessatti argaman irratti ogeeyyota muuxannoo ga’aa qaban ramaduun hawaasni tajaajila fooyya’aa akka argatuuf tattaaffii ni goona jedhaniiru.
Kanuma irratti hundaa’uun buufataalee fayyaa magaalichaa 99 keessaa 8 tajaajila haadholii deessisuu fi yaala baqaqsanii wallaanuu akka laatan taasifneerra jedha aadde Maahileet.
Dandeettii ogummaa ogeeyyii fayyaa cimsuuf leenjiin itti fufiinsa qabu bifa haaraan…
Ogeeyyiin fayyaa hawaasni of dagannaa akka dhaabu yaadachiisan
Galmi Barkumee wallaansa addaaf akka oolu qaamolee tumsa taasisaniif beekamtiin…
Duulli talaallii gifiraa boorurraa kaaset laatama
Dandeettii ogummaa ogeeyyii fayyaa cimsuuf leenjiin itti…
Ogeeyyiin fayyaa hawaasni of dagannaa akka dhaabu…
Galmi Barkumee wallaansa addaaf akka oolu qaamolee tumsa…